Xarumihii Ganacsiga Galkacyo oo la xiray iyo abaabul dagaal oo ka socda.
August 25, 2021 Xuseen 3
Waxaa Maanta inta badan xiran goobaha Ganacsiga Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug kadib amar xalay kasoo baxay laamaha Amniga Magaalada.
Ganacsata ayaa dhaqan geliyey awaamiir laamaha Amniga Magaalada ay xaley soo saareen, kaas oo ahaa in la xiro Maanta Goobaha Ganacsiga, sidoo kalena dadka ay kasoo qeyb galaan banaanbax looga soo horjeedo Al-Shabaab
Wadooyinka waaweyn ee Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa la dhigay Ciidamo Boolis ah, waxaana socda diyaar garoowgii ugu dambeeyay ee banaanbaxa lagu dhiirigelinayo Ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Intabadan deegaamada Galmudug ayaa waxaa xilligaan ka socda guluf dagaal oo ay wadaan Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Daraawiishta Galmudug, kaas oo ka dhan ah Al-Shabaab.
re: Jawaabtii tamanniga iyo qusacbalaatka Kayd Media
Waxaad meesha kusoo qortay waa wixii aad 1991 dadka ku kiciseen iyo wax aad kasoo guurisay buugtii uu qoray ninkii cuqdaddda kala soo baxay uurka hooyadiis ee C/Qaadir-Oromo. Maadaama uu dhintay intaa ka badan ma oranayo. Waxaa layaab leh inay idiin qoran yihiin wixii dhexmaray Hawiye iyo Daarood ilaa maalinkii odayga Daarood cagaha soo dhigay dhulka Soomaaliyeed. Nasiibwanaag, Daarood cuqdaddaas iyo gocoshadaas ma qabo, wax kasta oo soo maray amase ku dhacayba. Waxaa jeclahay inaan arrimahaas uga jawaabo sida u kala horreeyeen.
•Waxaad ka hadashay doorashooyin lagu shubtay oo ka dhacay Dhuusamareeb iyo Kismaayo berigii xukuumaddii rayidka. Horta, waa wax iska caadi ah in xisbiga talada hayaa isku dayo inuu doorashada ku shubto, mana aha arrin qabiil loo tiirin karo. Dhuusamareeb ma ahayn sida ay maanta tahay oo berigaas Mareexaan baa ugu yaraan kalabarkeed deggenaa, taariikh ahaanna degaanka ay ku taal waxaa lahaa Mareexaan. Kismaayo haddii lagu shubtay, maxaa Hawiye ka khuseeya? Waxaa idin ku jira riyo iyo tamanni inaad Kismaayo wax ku leedihiin!
•Waxaa ka hadashay, marar badanna siyaasiintiinnu ku celceliyeen, dhacdo beri geel lagu xareeyey Dhuusamareeb. Ilaa xilligii gumeysiga ayaa qoladii dhib geysata la gabagabayn jirey geelooda oo la xarayn jirey. Geeliinuna uma horreeyn geel inta la xareeyo markaas kadib baarka iska cunay gaajo awgeed.
•Waxaad sheegtay gabdho caano keensada oo Kismaayo lagu faraxumayn jirey. Horta, meesha dowlad iyo sharci baa ka jiray, dadkuna waa muslimiin. Xaqiiqna waxaa ah inaan dhaqanka caynkaas ah ka suurtoobin Daarood. Waxaas iyo wax ku xun waa waxa idinka la idin ku yaqaan.
•Waxaad ka hadshay in Jubbaland dad lagu dulmiyo. Hawiye maxaa Jubbaland ka galay? Markii Daarood ka qabsaday gaalomadow, Hawiye maba laga aqoon Jubbaland. Haddiise ay kula tahay in afarta Gaaljecelsha ah ee awooweyaashood looga keenay Hiiraan qowsaarro ahaanta ay Jubbaland wax ka yihiin waad riyoonaysaan. Waa wixii waqtigu kaga lumay Xasan Sheekh ee uu aakhirkiina ku hungoobay. Cawramaleh ma aha Hawiye iyo Irir midna, waagii horena waxayba sheegan jireen Warsangali.
•Waxaad ka hadashay dadkii la dejiyey Shabeellada Hoose iyo qaxootigii la dejiyey Hiiraan. Dadkaasi Soomaali oo dhan bay koobanaayeen oo ilaa Togdheer baa laga keenay. Ujeeddaduna waxay ahayd in naftooda la badbaadiyo ee ma ahayn dhulboob. Berigaasna Soomaali waa isku duubnayd oo dhul ma kala sheegan jirin. Dadkaasi aakhirkii ama dhulkoodii bay ku laabteen amase meelo kale ayey aadeen. Anigu ma garanayo magaalo Hawiye oo aan Cadale ahayn oo dad la dejiyey. Shabeellada Hoose goormaa Hawiye yeeshay? Ma degaan Hawiye oo Carbiska Afgooye koonfur kasii xiga baa jjra? Qaxootiga Hiiraan waxaa loo dejiyey waxay ku dhowdahay dhulkii ay kasoo qaxeen, dhul la’aan ma hayn dadkaas ee naftooda ayey lasoo carareen.
•Waxaad sheegtay in la sameeyey 18 gobol. Marka la eego baaxadda dhulka Somalia, wuu noqon karaa 18 gobol iyo ka badanba. Haddii aad ula jeeddo Daarood baa gobollo badan helay, hadde Darood wuxuu leeyahay in ka badan 50% dhulka Somalia. Hawiye ma wuxuu leeyahay wax aan ahayn min koonfurta Gaalkacyo ilaa Carbiska Afgooye (750km) oo uu ku jiro dhulka Mareexaan ee waqooyiga Galgaduud?
•Waxaad tirisay duqyaashii (mayors) Xamar laakiin ma aadan sheegin kuwii Hawiye sida Cismaan Jeelle iyo Cali Ugaas. Tan kale, magaalada waa la wada dhistay oo waa la wada deggenaa, marka, maxaa u diidaya Daarood inay mayor ka noqdaan? Xamar sidee ahayd 1960 amase 1969? Sidee ahayd kahor dagaalkii 1991, maantase sidee tahay? Yaa sidaa ka dhigay? Xaqiiq waxaa ah waxaad taqaannaan sida wax loo dhaco amase loo xado ee ma taqaannaan sida wax loo dhiso.
•Waxaad sheegtay guddoomiyeyaal degmo (DC) iyo taliyeyaal boliis oo u badnaa reer Puntland berigii dowladdii rayidka ahayd. Waxaan oran karaa waxay lahaayeen kartideed iyo aqoonteed. Ilaa maantadan ayeydnaan tacliintana ku dadaalin isla markaan aydnaan amaano lahayn oo musuqaysaan wixii la idiin dhiibo.
•Waxaad ka hadashay buraanbur Xaliima Soofe. Waqtigaas wuxuu ahaa markii dagaalku isu beddelay qabiilka ee la islaynayey, dowladna majirin, qolo walbana waa isguubaabinaysay. Magool waxay ahayd fanaanad qaran oo laga filayey inaan sidaas caadifad u qaadin.
•Waxaad sheegtay qabrigii odayga Daarood oo laga dhisay Haylaan — Sanaag. Daarood ama qabri ha lahaado ama yaanu lahaan laakiin waa nin durriyaddiisii sidaa ugu baahsan tahay Geeska Afrika. Haddii aad ula jeeddo in dhulka qabrigaa laga dhisay qolo kale lahayd, annaguna waxaan ognahay in inta badan gobolka Sanaag yahay dhul Daarood, haddii qolo dhul laga dhacayna iyagaa laga dhacay oo lagu dhulballaarsaday.
•Waxaad sheegtay in dagaalkii Xamar ee 1991 ay galeen maleeshiyo Majeerteen iyo Mareexaan oo qabiil u baddeleen. Oo idinku ma dowlad dagaallamaysa ayaad ahaydeen mise cid aan Hawiye ahayn baa idin wehelisay? Ma ina Cumar-jeeskii suubbiska ahaa baa wejiga dagaalka beddeli karay? Mise waxaad doonayseen idinkoon laf quri idin ka maqnayn in la idin ku fasaxo Jaalle Siyaad iyo Mareexaan oo sheedda la idinka daawado?
•Waxaad sheegtay Galgale oo dumar kufsaday. Anigu taas ma maqal, haddiise ay dhacdayba, hadde, idinkaa baray illeen isku degaan iyo dhaqan baad ahaydeene.
•Waxaad macaluushii Bay iyo Bakool u eedaysay Mareexaan. Horta, Raxanweyn iyagaa faraha la galay dagaal aan khusayn oo u dhexeeya Hawiye iyo Daarood, iyagaana Mareexaan ku beegsaday jidgooyo iyo miino-xabaalis. Tan kale, cid walba way ogtahay in sababta macaluushu u dhacday tahay markii mooryaantii USC jidka u fariisteen oo boobeen wax kasta iyo cuntadii dadkaas gaari lahayd, waana sababtii ay u yimaadeen ciidankii caalamiga ahaa. Xitaa filmka Black Hawk Down ee Maraykanku sameeyey waxaa ku jira clip lagu jilayo mooryaanta oo raashinka boobaya oo Af Soomaali ku oranaya: “General Caydiid baa raashinkan leh.”
•Waxaad sheegtay in ciidankii Tigraygu nus milyan qof ku dileen Xamar! Atomic bomb miyey ku rideen? Intaa haddii lagu dilay, maanta Xamar waa haawan lahayd. Dadka tiradaas qiyaasa waxay ku sheegaan ilaa toban kun oo qof oo u badan raggii dagaallamayey.
•Waxaad ka hadashay odayaal Sacad oo lagu laayey Hilmo. Arrinkaas ciidankii dowladda ayaa geystay, haddii saraakiil la socdeenna wakiil kama ahayn qabiilkooda, ciidankii wax layeyna iskudhaf buu ahaa.
•Waxaad sheegtay in Sacad badbaadiyey Cumar Maxamuud? Goormaa Cumar Maxamuud halistaas galay oo Sacad magangalay kadibna uu badbaadiyey? Barkado waa la burburiyey dhanka waqooyiga fog ee Mudug, dagaallana SSDF iyo ciidanka waa ku dhexmari jireen dhanka xadka Itoobiya. Haddii Cumar Maxamuud qaxaanna waxay aadi jireen dhanka Itoobiya. Way dhici karaan hadallada ay yiraahdeen ninkii dowladda ka socday iyo Jaamac-seed laakiin majirin meel Sacad ku badbaadiyey Cumar Maxamuud iyo cid kale midna.
•Waxaad ka hadashay dagaalkii aad habeen ku mirteen 1991 reer Gaalkacyo oo khabarmoog ah oo iska hurda, kadibna aad dadkii shacabka ee salalay oo cararaya wada toogateen idinka oo aan u aabbeyeelin. Odayaashana iyagoo guryahoodii iska hurda ayaad ugu dhacdeen oo ku layseen, mana jirin wax ay Sacad u geysteen; waxay u dhinteen cuqdad ku salaysan inay idin gumeysan jireen suldaannadii reer Keenadiid. Haddii reer Gaalkacyo ogaan lahaayeen in weerer lagu soo yahay, dagaalku weji kale ayuu yeelan lahaa. Ugu dambeyntiina Gaalkacyo kabihiinnii ayaad ka cararteen, aakhirkiina sulux iyo heshiis ayaad kusoo noqoteen oo kusoo degteen xaafaddiinna Baraxley.
•Daarood cuqdad ma qabo, gocoshana ma yaqaan, mana yaqaan wax ka dhexeeya nabad iyo dagaal. Waxaa cuqdad qaba qolada ay u qoran tahay xitaa hadal ay qof isdhaafsadeen — oo weliba been iyo buunbuunis lagu daray — ilaa maalinka Alle uumay.
salaan sare AAR,aad baan ugu dirsaday jawabtada waxaa moodaa iney buug kuugu qorneyd oo aad kasoo min guurisay hawiye siiba habar gidir[sacad] waxay niicdaas ku hayeen ilaa 1991kii ,been lama sheegee ma arkin salebaan cuqdad qaba ama ceyr arimahas dhacay goconaaya,, hana laayibin sacadka waxay isku heestaan iney hawiye ugu caqli iyo xoog badan yihiin xaqiiqduna waa ugu caqli iyo itaal daran yihiin oo waxay ku wareereen dhaqanka iyo dhanka ay raaci lahayeen dhanka hawiye ama darood midna majiraan taariikhdoodu waa caydiid isagana isagoo baroon kor saaran baa wiil yar oo ciidankii muse suudi ah beerka xabad uga dhuftay,cabdulahi ciise waxu ahaa wiil yar oo rag khuburaa [mudulood/majerteen] shaqo uga dirsadeen qaramada midoobey marki uu soo qabtayna xooga inta loo laabay la dhahay meel fariiso wali ma aadan qaan garine yacni madaxweyne ama raisalwasare ma noqon kartid,taariikhdoodu waa intaas kama hadlaan adoontii ay hobyo ku ahaayeen ama xoog inta galkacyo looga saaray wisil layskugu geeyay uuna baraxley kusoo ceshay cabdulahi yusuf oo rabay inuu xukumo soomaliya oo dhan.
Horta ragga somaaliyeed meey qabyaalada ka jiraan aduunkii tag oo naga tag anana anagaa isu jeedana waxa laga faa,iido ma qoro,waxa khasaaradiisa.la arkey waa laga gubaa.qabiil khasaaro weeyen buu noo keeney iyo inaan dal iyo dadna.weeyeney oogaalo nagu soo duushay ee raggow ka jooga oo illahiin idin abuuray ood hortageeyesaan ka baqa ummadan muslinbaa qabiilbaad guryohoodi ku burburiseen ,wali a waad is daba socodaan kalana hariweeyeedeen miyiidnaan Muslim aheeyen salada tuulada oo markii waxa si kanoqodaan gacamaha kor u taaga oo alle badriya,subaxanallaha , ninkii waxa diley waa ka heeyesaa, kii waxa kufsadey waa ka horeeya oo kutibka aan waxa reebin kheyer iyo sharbeey ugu qorantahay ee ciliiyiin.nin nin dambigiisa la qaadayaa ma jiro, Ee xusuusta akhiro ummad dhan baad qabayaalad kala dhexbixi ladihiinee.